I-podcast: Ukwenza i-African Science ibonakale - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on I-20th February ngo-2021 I-20th February ngo-2021
Ithimba le-AfricArXiv lifake isandla esiqeshini sesithathu se Ikhodi Yomcabango, i-podcast ku-'software, ubunjiniyela, ucwaningo nanoma yini ephakathi 'eyenziwe ngu- UPeter Schmidt we Inhlangano Yezobunjiniyela Besoftware.
Thola ukuthi i-AfricArXiv yenza kanjani ukuthi umphumela wokucwaninga ngaphakathi nase-Afrika ubonakale ngale podcast exhumanayo.
Ukwenza I-African Science Ibonakale
Ukushicilela noma ukubhubha kwabaphenyi nososayensi. Ngaphezu kwalokho abacwaningi nososayensi abaningi abavela emazweni ase-Afrika balwa kanzima ukuze umsebenzi wabo ushicilelwe futhi waziwe. Ithimba elizungezile https://info.africarxiv.org I-AfricArXiv isebenza kanzima ukubhekana nalokho.
Nazi izixhumanisi ezimbalwa ezishiwo kulesi siqephu ongafuna ukuzihlola:
https://www.stm-assoc.org I-International Association yesayensi, ubuchwepheshe kanye nokushicilelwa kwezokwelapha
https://www.tcc-africa.org Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana e-Afrika
https://peerreviewweek.wordpress.com Ukubuyekezwa kontanga Umcimbi wamasonto onke nowaminyaka yonke wokuxhumana nabalingani emkhakheni wokushicilela nowokubuyekeza ontanga
https://www.sspnet.org Inhlangano Yokushicilela Kwezemfundo
http://openaccessweek.org Vula Isonto Lokufinyelela
Mayelana ne-Society of Research Software Engineering
ISociety of Research Software Engineering yasungulwa ngenkolelo yokuthi umhlaba othembele kusoftware kumele ubazi abantu abawuthuthukisayo. Umsebenzi wethu ukusungula indawo yocwaningo ebona indima ebalulekile yesoftware ocwaningweni. Sisebenza ukukhulisa amakhono esoftware kuwo wonke umuntu ocwaningweni, ukukhuthaza ukubambisana phakathi kwabaphenyi kanye nochwepheshe be-software, nokuxhasa ukwenziwa kwendlela yokufunda yeziNjiniyela Zesoftware.
Categories:	InterviewVula UkufinyelelaPodcast